Ntanetị mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana nyiwe mmekọrịta
30 Enterprise Social Communication Platform
Tuzdee, Machị 3, 2020 Tọzdee, Disemba 15, 2020 Douglas Karr
Usoro nchịkwa oru ngo nke ntanetị abanyela n'ime nyiwe mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-etinye iyi ọrụ, ọrụ, ịhazi usoro, njikwa akwụkwọ yana njikọta na sistemụ ndị ọzọ. Nke a bụ ụlọ ọrụ na-aga n’ihu n’ihu ma enwere ọtụtụ ndị egwuregwu na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị nwara ịchọpụta ndị egwuregwu kachasị n'ime ụlọ ọrụ nkwukọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya ahịa ebe a!
Azendoo - Mee atụmatụ, hazie, rụkọta ọrụ ma soro ọrụ ndị otu gị si n'otu ebe.
Bizzmine - Mgbanwe onodu arụ ọrụ na-eme ka usoro azụmahịa gị dị mfe.
Bloomfire - Bloomfire ihe ọmụma itinye aka na ikpo okwu na-enye ndị otu egwuregwu ike ịbanye na ma nye aka na ọgụgụ isi nke nzukọ gị.
Brightpod bụ ihe kachasị mfe ngwanrọ na ngwanrọ nke ndị ahịa gị ga-eji nwee obi iru ala, itinye uche na njikwa. Tụkwasịrị obi karịa ụlọ ọrụ 428.
Chanty - nkata AI-kwadoro otu nkata. Nweta ozi na-akparaghị ókè free ruo mgbe ebighị ebi.
Otu Cisco Webex - ihe niile eji emekọ ihe ọnụ iji chọọ ọrụ na-aga n'ihu ma jikọọ na ngwaọrụ ndị ọzọ ị ga - eji mee ka ndụ dị mfe.
Dina - Napụta ndị ahịa gị na ndị otu ahịa na - echekwa aka n’achụghị mma maka akara ngosi ejiri ngwa ngwa na ngwa mkpanaaka taa.
Ihi ụra - Ikpokọta izi ozi na ịkekọrịta faịlụ na ọrụ, leepra nwere ihe niile ịchọrọ iji hazie ọrụ ndị otu gị site na echiche rue igbu.
Flock - Agbo na-eme ka nkwukọrịta na imekọ ihe ọnụ na-enweghị isi
Egwuregwu - mkparịta ụka gị niile, ihe ọrụ na ngwaọrụ n'otu ebe. Na-ebute ọrụ ụzọ, dozie nsogbu, chọọ ma hazie gafee otu, ebe na oge.
Jive - N'ime ụlọ ọrụ, Jive platform na-enye netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta nke ndị ọrụ ebe njikọta na imekọ ihe.
Jikọọ - Ngwaọrụ mmekorita niile, di nfe na enweghi nghọta.
MangoApps onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nkwukọrịta & ikpo okwu.
Ihe kachasị mkpa - Mmekorita otu ndi otu na izipu ozi nke na ebunye on-premise ma obu igwe ojii ka ha n’okpuru njikwa IT.
Ngalaba Microsoft - Kpaa nkata, zukọta, kpọọ, ma rụkọta ọrụ, n'otu ebe.
Microsoft Yammer - Jikọọ na ndị mmadụ n'ofe nzukọ gị iji mee mkpebi ka mma, ngwa ngwa.
Monday.com - ngwa oru mmeko nke gha enyere gi aka ileba anya n’iru ndi otu gi ka igha mara ebe ihe no.
Podium - nhazi oru nhazi oru nke ndi ndu tukwasiri obi na ndi oru n’ahu ha n’anya n’aru oru.
Protonet - Mba. 1 ngwọta maka nkwukọrịta na imekọ ihe ọnụ na gburugburu ebe nchekwa.
Rocket.chat - Jikwaa nkwukọrịta gị, jikwaa data gị ma nwee ngwa ọrụ aka gị iji melite arụ ọrụ otu.
Rịịl - Gị otu mmekota niile na otu ngwa.
Ahịa Salesforce - Kekọrịta nka, faịlụ, na data gafee ụlọ ọrụ gị na Enterprise Social Network.
Ihe ịga nke ọma SAP Nchịkwa Ahụmịhe Mmadụ (HXM) Suite - mepụta ụdị ọrụ ndị ọrụ na-eme ka nsonaazụ azụmaahịa dị mma.
slack - Nọgidenụ na mkparịta ụka haziri na Slack, ihe amamihe dị na email.
Swabr - usoro nkwukọrịta nkwukọrịta maka ụlọ ọrụ
Mmekọrịta ọrụ - Imekọ ihe ọnụ bụ ọrụ na njikwa njikwa ngwa ọrụ na-enyere ndị otu aka imeziwanye mmekorita, ọhụụ, ịza ajụjụ na nsonaazụ nsonaazụ
Ọ dị egwu - Jikọọ. Rụkọta ọrụ ọnụ. Kee.
Egwu - Twist na-enye ndị otu gị otu nzukọ a haziri ahazi iji kwurịta echiche, kesaa mmelite, ma wuo ihe ọmụma nke onye ọ bụla nwere ike ịlaghachi azụ - ọbụlagodi afọ ole na ole.
waya - Mmekọrịta nke oge a na-ezute nchebe kachasị elu na ahụmịhe onye ọrụ kachasị elu.
Adaba bụ usoro ntanetị iji mee ka ọrụ rụọ ọrụ ngwa ngwa, dị mfe, ma rụọ ọrụ nke ọma na ngalaba na-ekesa ma kesaa.
Tags: azendoobizzmineọkụ ọkụnkatajikọtaramkpokọtaogwe osisi collabspotdiscuzzgrafffectụlọ nzukọjiveJikọọmangoappsmindjet jikọọoogwavePodioprotonetnchịkọtaihe ederedetụọ yandị ahịaire ere ahịasapsap ihe ịga nke ọmamkpesammadụihe ịga nke ọmaswabrarụ ọrụyammer
Trendy Tech na Nnukwu data: Ihe ị ga-ele anya na nyocha ahịa na 2020
Kedu ihe kpatara azụmahịa ọ bụla eCommerce ji achọ ngwa ọrụ ọnụahịa dị omimi?
Aug 27, 2012 na 4:28 PM
Enwere m mmasị n'ọrụ, mana oge ụfọdụ ọ na-akarị ike. Kedu otu mmadu si ahọrọ?
Aug 27, 2012 na 5:38 PM
Ndewo @ facebook-1097683082: disqus! Imirikiti nyiwe ndị a nwere njikọta na atụmatụ ndị na-anaghị agabiga ibe ha. Ọ na-esiri ụlọ ọrụ ike ịzụta izizi ngwanrọ ngwanrọ wee nwaa ịhazigharị usoro ha iji nabata ya. Nke a na - edugakarị ọdịda.
Anyị na-akwado ịdekọ usoro dị n'ime gị - gụnyere tupu na mgbe ihe mechara, mgbe ahụ ị ga - ahụkarị ikpo okwu nke kwekọrọ na ya. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị na-ahu nagide email a otutu… mgbe a n'elu ikpo okwu na-agụ email Ibọrọ na pushes ificationsma Ọkwa site email na nwere oke akara ga-arụ ọrụ. Mana ọ bụrụ na ị jiri Salesforce… mgbe ahụ ị nwere ike iji otu nke na-etinye ọnụ. Nwere olileanya na-enyere aka!
Aug 27, 2012 na 10:07 PM
Daalụ! Nnyocha ahụ gara n'ihu!
Aug 30, 2012 na 4: 38 AM
Daalụ nke ukwuu maka ndepụta ahụ. Fọdụ aha bụ ihe ọhụụ maka na ọ dị oke mma dịka m nwere ohere ịmara ngwa ọrụ ọhụụ. Anọ m na-eji Comindware njikwa njikwa nke dịkwa oke mkpa maka nkwukọrịta, njikwa ọrụ.
Sep 6, 2012 na 12:55 PM
Ejiri Discuzz - nke m gụrụ na Geekwire. Ọ dị ka Microsoft nwere mmasị na ha!
Sep 17, 2012 na 11: 35 AM
Gbakwunyere! Daalụ Julia!
Jul 17, 2013 na 5:08 PM
Jul 17, 2013 na 6:45 PM
Jul 18, 2013 na 9:33 PM
Kwuru, daalụ @sahilparikh: disqus
Ọkt 7, 2013 na 1:22 PM
Nnukwu ndepụta. Clinked na-enweta ntuli aka m maka aha kacha njọ na Jive maka vidiyo kacha njọ (ọ bụ ezie na ọ bụ ezigbo ikpo okwu).
Dee 7, 2013 na 10: 31 AM
Dee 7, 2013 na 10: 32 AM
Hai, olee otu imere
Mar 25, 2014 na 5: 21 AM
I chefuru banyere nyiwe efu kachasị ewu ewu - Bitrix24 na Asana